कस्तो अवस्थामा लिच्ची खानुहुदैन ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
तपाई अधिकांश पाठकलाई थाहा छ भारतको बिहारमा पछिल्लो दुई दशकदेखि अज्ञात रोगका कारण बर्सेनि एक सयभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु हुँदै आएको थियो । दिउँसोभरि खेलिरहेका, रमाइरहेका बालबालिका राति अकस्मात छलपटाएर ढल्ने गर्दथे।
स्वस्थ बालबालिकाको एक्कासी हुने निधनले चिकित्सकसमेत अमलममा परेका थिए। के कारणले बच्चाको मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा रहस्यमै थियो। तर, एउटा गहन खोजले ती बालबालिकाको मृत्युको कारण पत्ता लगाएको छ ।
अमेरिकी र भारतीय चिकित्सकहरु सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले ती बालबालिकाको मृत्युको कारण सबैले मन पराउने फल लिचीलाई मानेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ की विषादी भएर मात्र हैन खालि पेटमा बच्चाहरुले खाने गरेको लिची नै उनीहरुको मृत्युको कारण हो। खासगरी लिची फल्ने महिना मेदेखि जुलाईसम्ममा ती बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो।
मेडिकल जर्नल दि ल्यानसेटमा प्रकाशित अनुसन्धान अनुसार ती बालबालिका खालि पेटमा लिची खाएकै कारण ढल्ने गरेका थिए। लिचीमा पाइने विषलू तत्व हाइपोग्लिसिन त्यसको मुख्य कारक थियो। मुजफ्फरपुर लिची उत्पादनका लागि प्रख्यात ठाउँ हो, त्यहाँका बालबालिकाले खालि पेटमा बगैँचामा झरेका चिली खाने गरेको र त्यसले रातिको समयमा उनीहरुलाई समस्या पार्ने गरेको जर्नलमा लेखिएको छ।
सन् २०१४ को मेदेखि जुलाईसम्म मुजफ्फरपुर अस्पतालमा भर्ना भएका बालबालिकाको परीक्षण गर्दा उनीहरुको दिमाग सुन्निएको पाइएको थियो। लिचीमा हुने हाइपोग्लिसिन नामक विषालू पर्दाथ नै यसको मुख्य कारण थियो।
अहिले बिहारका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले गरिब क्षेत्रका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा रातको खाना खुवाउन र लिचीको मात्रा घटाउन भनेका छन्। चिकित्सकहरुले बच्चामा त्यस्ता लक्षण देखिए लो ब्लड सुगरको तत्कालै उपचार गर्न सुझाब दिइएका छन्।
यो अनुसन्धानपछि बिहारको ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामी बच्चाको संख्या आधाभन्दा बढीले घटेको ‘न्युयोर्क टाइम्स’ले जनाएको छ। यसैले बिहानको समय लिची खानू सबैका लागि हानिकारक हो । यसमा भएको तत्व नै खालिपेटमा विषदी बन्छ । तर ज्यान लिन्छ ।
लिची खेती गर्ने तरिका :
कटहर परिवारमा पर्ने सानो तथा मीठो फल लिची जसलाई वैज्ञानिक नाममा (Litchi chinensis) भन्छन, जेनस लिचीको एकमात्र सदस्य हो। यो ऊष्णकटिबन्धीय फल हो, जसको मूल निवास चीन हो । यो सामान्यतः मैडागास्कर, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण ताइवान, उत्तरी भियतनाम, इण्डोनेशिया, थाईल्याण्ड, फिलीपींस दक्षिण अफ्रीका र नेपालमा पाइन्छ।
लिची खनिज तत्वले भरिपूर्ण एक अत्यन्त स्वादिष्ट फल हो। एउटा ताजा र पाकेको लिचीमा ७० देखि ७७ प्रतिशतसम्म गुदी पाउन सकिन्छ। यसको प्रमुख पोषक तìव कार्बोहाइड्रेट्स हो जसको मात्रा स्थानीय जलवायु र उब्जाउ माटोमा निर्भर गर्दछ।
रासायनिक विश्लेषणअनुसार एउटा ताजा र पाकेको लिचीमा चिनी वा गुलियो पदार्थको मात्रा १५ दशमलव ३ प्रतिशत, प्रोटिन एक दशमलव १५ प्रतिशत र अम्ल एक दशमलव ६ प्रतिशत रहेको हुन्छ। यसका साथै यस फलमा क्याल्सियम, फोस्फरस, फलाम तìव, खनिज लवण एवं भिटामिन ‘सी’ पनि प्रचुर मात्रामा पाइने भएको हुँदा यो फल स्वास्थ्यको दृष्टिले अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ।
कलेजो र कमलपित्तजस्ता रोगीको लागि त यो फल एक किसिमले वरदान नै मानिन्छ किनकि कलेजोको असामान्य यसको नियमित सेवनले सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्छ। लिचीको सेवनले पाचन रस उत्पन्न गर्नमा सहयोग पुग्नाका साथै पाचन प्रणालीमा रहेका विकारहरूलाई पनि निर्मूल पार्दछ।
यसको सेवनले भोक बढाउने गर्दछ। दिमागीय कमजोरी हटाउन र स्मरणीय शक्ति बढाउन पनि यो फल निकै लाभदायक मानिएको छ। यसका साथै मुटुको धड्कन बढ्ने र हात खुट्टा पोल्नेजस्ता रोगीहरूले पनि लिची खाने र यसको रस दल्ने गर्नाले अत्यन्त फाइदा हुने बताइएको छ। त्यति मात्र नभई यो फल वीर्यबर्धक र वातपित्त नाशक पनि मानिन्छ। यो फल विभिन्न दृष्टिकोणले स्वास्थ्यबर्धक हुँदाहुँदै पनि कही कफबर्धक पनि भएकाले लिची खाएको कम्तीमा आधा घण्टासम्म पानी खान भने हुँदैन।
लिची खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केहि कुराहरु :
लिची कस्तो हावापानीमा हुने फलफूल बाली हो ?
लिचीको बृद्धि र विकासको लागि कतिसम्मको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ ?
लिचीको खेती गर्न वार्षिक वर्षा कतिसम्म हुनु आवश्यक छ ?
लिची खेतीको लागि कस्तो माटो उपयुक्त मानिन्छ ?
लिचीको बिरुवा कुन तरिकाले लगाउन उपयुक्त हुन्छ ?
लिचीका बिरुवा कति दूरिमा लगाउँदा उचित हुन्छ ?
लिचीको बगैंचा स्थापना गर्दा रेखाङ्कन गर्न किन जरुरी छ ?
लिचीको बिरुवा रोप्नु अगाडी कति गहिराईको खाड्ल खन्नु पर्दछ ?
लिचीका बिरुवा रोप्नु अगावै हावा छेक्ने बिरुवा लगाउन किन आवश्यक हुन्छ ?
लिचीमा मलखादको ब्यवस्था कसरी गर्न पर्दछ ?
Don't Miss it दैनिक दिनको २० देखि ३० मिनेट म्युजिक सुन्दा यस्ता फाइदा हुन्छन्
Up Next निहुरिएर लामो समयसम्म मोबाइल चलाउने बानीको यस्ता छन् बेफाईदा